Ukucubungula Izingxenye Zomshini - K-Tek Machining Co., Ltd.
I-K-Tek Machining Co., Ltd. yasungulwa ngo-2007, eDongguan, eChina, "inhlokodolobha yokukhiqiza yomhlaba", ehlanganisa indawo engaphezu kwamamitha-skwele angama-20,000, akhethekile ekucutshungulweni kwezingxenye zemishini futhi isidlulile i-ISO9001 : Isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi ka-2015.
I-K-Tek Machining inikezela ngezinsizakalo ze-OEM / ODM, singenza ngezifiso ukukhiqizwa kwazo zonke izinhlobo zezingxenye zemishini ngokunemba ngokuya ngezidingo zamakhasimende, imikhiqizo ehlobene nemishini, i-elekthronikhi, ezishintshayo, ezemoto, ezokwelapha, amandla amasha neminye imikhakha. Ukuze kuqinisekiswe izidingo zekhwalithi yamakhasimende ethu, singenise imishini yokucubungula ethuthukile nemishini yokuhlola efana ne-Five-axis Machine (DMG), i-CNC, i-WEDM-LS, i-Mirror EDM, i-Grinder yangaphakathi / yangaphandle, i-Laser Cutting, i-3D CMM, I-Height Gauge ne-Material Analyser njll kusuka e-Germany, Japan, Switzerland nase-United States. Le nkampani inezinto ezanele zokucubungula imishini kanye nesistimu yokuphathwa kwekhwalithi eqinile, ikhwalithi yezingxenye ezinemba ingahlangabezana namazinga embonini yomhlaba, imikhiqizo ethengiswa phesheya kwezilwandle.
Izinto zethu ezijwayelekile ziyinsimbi engagqwali, i-aluminium, ithusi, insimbi ephansi yekhabhoni, amaplastiki wobunjiniyela nezinye izinhlobo zensimbi ye-alloy. Singabuye sinikeze ukwelashwa kokushisa kanye nokwelashwa okuhlukahlukene kwendawo kumakhasimende: ukupholisha, ukufaka i-anodizing, ukufaka i-galvanizing, i-nickel plating, i-silver plating, i-passivation, i-powder spraying, njll.
Njengomkhiqizi we-OEM, singanikela ngezingxenye ze-Precision CNC Machining kuzinto ezahlukahlukene:
Izinto: i-aluminium alloy, ithusi, insimbi engagqwali, insimbi emnene, i-zinc alloy, i-PMMA, iTeflon kanye nokunye.
• Surface Qeda: IsiPolish, i-Anodize, i-Zn / Ni / i-Cr plating, i-Gold / i-Silver plating, i-Inactivation, i-Heat treatment, i-Powder enamathela njll.
Izinsiza kusebenza: (3 & 4 & 5) i-axis cnc Machining, imishini ejwayelekile, i-WEDM-LS, i-Mirror EDM, i-Grinder yangaphakathi / yangaphandle, i-Laser Cutting, i-3D CMM, i-Height Gauge ne-Material Analyzer njll.
• Machining ngokunemba ukubekezelelana: 0.005-0.01mm.
• Inani lokuqina: ngaphansi kuka-Ra0.2.
• Ukwenziwa okuthuthukile, ithuluzi lokulinganisa, ithuluzi, ithuluzi lokusika.
• Izingxenye ezikhiqizwa ngokuvumelana nemidwebo noma amasampula.
• Insizakalo esheshayo, enobungcweti nokusekelwa, izixazululo zokudala nezintsha.
• Amakhono aphelele, izivumelwano zokuhlinzekwa kwesikhathi eside.